Ụlọ Nka Archives - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụlọ Nka
April 5, 2016	Featured, NTỤRỤNDỤ 0
Onye Ije The Traveller bụ ihe onyonyo emepụtara iji gosi ọtụtụ ihe ọdịdị mara mma na ihe omimi dị N’ala Igbo. Ndị nnabata ọbịa bụ ọmalicha ada igbo Kiki Omeili na ezigbo nwa-afọ igbo Kelechi ‘Kaycee’ Udechukwu. Ha abụọ ga eduru anyị ga-hụ ọmalicha ihe di iche-iche dị N’ala igbo ...
April 5, 2016	Featured, NTỤRỤNDỤ 1
African magic igbo Channel 159 emepụtala ihe onyonyo ọzọ ha kpọrọ Usekwu Igbo. Ha mepụtara nke a iji nyere ndị mmadu aka mụtakwuo ezigbo ihe gbasara oriri na-edozi ahu. Usekwu igbo bụ ihe onyonyo emepụtara iji kụziri ndị mmadu otú e si esi ọtụtụ nri ndị igbo n’eri na ...
Ebengoli bụ ihe onyonyo ọhụrụ e ji asụsụ igbo mepụta ilebeanya n’ihe ntụrụndụ na Naijiria. Ndị nnabata ọbịa bụ ezigbo nwa-afọ igbo Stanley FunnyBone Chibunna, na ọmalicha umuada igbo Chioma Idigo na Nkem Uzowulu. Ha atọ ga enyochaa ihe nile n’eme na ọrụ ntụrụndụ na Naijiria dịka egwu ọhụrụ, nkiri ...
Igbo Amaka bụ ihe onyonyo ọhụrụ n’egosi na Africa Magic Igbo, Channel 159. Ọmalicha ada igbo Ngozi Nwosu ama-ama n’ọrụ ntụrụndụ bụ onye nnabata n’ihe onyonyo a. Ọ ga n’elebeanya n’ihe dị iche-iche n’eme n’ala igbo kita. Ngozi ga na-ahazi okwu dị ọtụtụ ụmụ igbo mkpa. N’ime nkiri a, Ngozi ...
April 1, 2016	NTỤRỤNDỤ Comments Off on Ebe ọ na kpọtu
Ihe ukwu mere eme n’Enugwu ụnyaahụ. Ụmụigbo na-ewu ewu biakwutere ọnụ na mmeme imepe “AfricanMagicIgbo” chaneelu 159 ha mere n’Enugwu ụnyaahụ iji ikwalite ihe gbasara asụsụ igbo na ihe ntụrụndụ ndi igbo dị iche-iche. Ndị n’eme ihe nkiri igbo ama-ama dika Pete Edochie, Onyeka Onwenu, Eucharia Anunobi, Clem Ohameze, Patience ...